Jornaya Activate: Mu-Musika Kuongorora uye Maitiro Ekuzvibata kweMahara-Hupenyu Kutenga | Martech Zone
Jornaya ari data-se-se-sevhisi kambani ine tarisiro yeanopfuura mamirioni mazana matatu emamiriyoni ekutenga kwevatengi nzendo mwedzi wega wega vachishanda mumisika uko vatengi vanoisa nguva yakakosha yekutsvaga, kuongorora, uye kuenzanisa sarudzo pane makuru-ehupenyu kutenga (MLP).
Jornaya Activate inopa chete mu-musika yekutarisisa uye maitiro enzwisisiro chikuva che chikuru-hupenyu kutenga vatengesi mumotokari, dzidzo, inishuwarenzi, uye mogeji.
Vashambadziri vanogona ikozvino kugamuchira zviratidzo zvekutanga zvevatengi vavariro, nekuziva kana vatengi vavo uye tarisiro iri mu-musika wechigadzirwa kana sevhisi yavanopa kana kana vari parwendo rwakafanana rwekutenga.
Jornaya Activate inogonesa vashambadziri kukwidziridza danidziro yemushandirapamwe, kuvandudza kubatanidzwa, uye kununura ruzivo rwevatengi zvirinani mukuchengetedza kwavo, kutora kwavo, uye zvirongwa zvekushambadzira. Nekutsanangudza ekutanga maitiro ekuzvibata, vatengesi vane hungwaru uye nekudyidzana kudyidzana kunowedzera kutora, kutengesa-kutengesa, uye mitengo yekuchengetedza.
Maitiro Jornaya Anoshanda Anoshanda
Jornaya ine kudyidzana kwekudyidzana uye tekinoroji inovhara zviuru zvezvienzanidzo zvekutenga mawebhusaiti uye masosi edhata. Iyo Activate mhinduro inowana uye inopa yakachengeteka, inoenderana zuva nezuva dhata uye nzwisiso pane US-based vatengi 'mune-musika maitiro.
Activate dhata inosanganisirwa zvirinyore mumateki emartech aripo kuburikidza neJornaya's Integrations Hub. Izvi zvinobvumidza vatengesi kushandura zuva rega rega kuwana data raJornaya zvakananga mukati meCRM yavo, CDP, ESP, dialer, kana chero chikuva chekushambadzira chinodiwa. Activate inosangana neanopfuura zana CRM uye ekushambadzira mapuratifomu anosanganisira Salesforce, Eloqua, Marketo, HubSpot, uye Velocify.
Maitiro Ekuita Anotungamira Kubudirira
Jornaya Activate inobatsira vatengesi kuti vanzwisise kuti vatengi vavo uye tarisiro varipi parwendo rwavo rwekutenga kuitira kuti vagone kuenzanisa nzira dzakakodzera uye nekupa ruzivo rwakakura rwevatengi. Jornaya's Vatengi Kubudirira uye Tsigiro Matimu ari pamwe nemutengi nhanho dzese dzenzira. Kubva pane kubatanidzwa kwepabhodhi kusvika pakubvunza pane akanakisa maitiro uye zano, Jornaya aripo kubatsira kutyaira kuenderera mberi kubudirira.
Verenga Zvakawanda Nezve Jornaya Activate
Jornaya Inodzivirira Sei Mutengi Zvakavanzika
Chakavanzika chevatengi chakakosha paJornaya. Shingairira unogadzira maitiro asingazivikanwe, unowana maonero, uye unonunura mune akareruka asi ane simba data mapakeji. Jornaya's Activate mhinduro haimbobatanidze chero ruzivo rwevatengi. Hapana ruzivo rwunozivikanwa (PII) uripo, rwakachengetwa, kana kugoverwa. Jornaya inogadzira zvinyorwa zvisingazivikanwe chete.
Tags: rwendo rwevatengijornayaJornaya activatechikuru-hupenyu kutengamlp